Krita 4.2.8 ikozvino yave kuwanikwa, kazhinji kugadzirisa bugs | Linux Vakapindwa muropa
Krita 4.2.8 ikozvino yave kuwanikwa, kazhinji kugadzirisa bugs
Nguva pfupi yapfuura, iyo KDE Nharaunda yakaburitsa nyowani yekuchengetedza kuburitswa kwesoftware yavo yakagadzirwa nevevanoita zvemifananidzo. Ndezve Krita 4.2.8, chitsva chitsva icho, mumashoko ake, chinosanganisira mashoma ekugadzirisa kupfuura v4.2.7. Icho chikonzero ndechekuti ivo vari kutarisisa pakunyorazve nzira iyo Krita inotakura uye inochengetedza zviwanikwa senge mabrashi, rinova basa rakawandisa uye rinoda nguva yakawanda nekutarisirwa.
Chikonzero chikuru chikonzero KDE Nharaunda iri kunyora zvakare chikamu cheKrita ndechevashandisi veWindows. Mwedzi wapera wega, Krita akawedzera 1.500.000 vatengi kune Microsoft's system kune yayo mushandisi base, saka zvinoita senge zano rakanaka kutarisisa zvishoma pavari. Pakazara, Krita 4.2.8 yaunza 44 kuchinja, zvirinani zvese kugadzirisa zvikanganiso kana kugadzirisa mashandiro eimwe basa.
Krita 4.2.5, expression yekumanikidza inomanikidzwa nedhigi ine mapfupi ekhibhodi
Krita 4.2.8: 44 shanduko uye yakawanda darling yeWindows
Windows kazhinji inonyora chete mafaera akachengetedzwa kudiski chairo kana richida. Saka kana iwe ukacheka simba kune komputa yako Windows isati yaita, inogona kukanganisa mafaira ako. Iine 1,500,000 vashandisi vakasiyana veKrita pane Windows 10 mumwedzi wapfuura, izvo zvinonyanya kuitika (sekunge kune vanhu vanoshanda chete nema autosaves asina zita, usaite izvozvo!), Saka ikozvino tinoedza kumanikidza kuWindows nyora mafaira ku diski mushure mekuchengetedza. Izvi zvinoita kuti kunonoka kunonoke paWindows, asi iyo yekuwedzera chengetedzo inofanira kuve yakakosha.
Krita 4.2.8 yave kuwanikwa yeWindows, macOS uye Linux. Kusiyana nezvimwe zvaburitswa, ese matatu masystem anoshanda akagamuchira yazvino vhezheni panguva imwe chete. Vashandisi veLinux vatove vainayo pa AppImage uye neshanduro Flatpak, asi iyo Snap vhezheni uye zvinyorwa, kusanganisira iyo KDE Backports, haisati yagadziridzwa parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Krita 4.2.8 ikozvino yave kuwanikwa, kazhinji kugadzirisa bugs
Sarudza zvakavanzika kana chengetedzo. Dambudziko revabereki veAmerica
Vashandisi veLinux Lite vanogona ikozvino kuedza Linux kernel 5.4